को हुन यी युवती ? जो ‘बो'ल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्, हेराैँ १२ तस्बिर - Nawalpur Dainik
को हुन यी युवती ? जो ‘बो’ल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्, हेराैँ १२ तस्बिर
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा सुन्दर र ह’ट तस्विरका कारण केहि महिलाहरु निकै भाइलर भएका छन् । यतिबेला सुन्दरताको कारण भाइरल हुनेको संख्या निकै बढ्दोक्रममा छ । सुन्दरताकै कारण एक सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेकी छन् ।
नाम केतिका शर्मा हो । २४ डिसेम्बर १९९५ जन्मेकी केतिको शरीर निकै आर्कषक खालको छ । उनकाे सुन्दरताले युवाहरु अाकर्षित
उक्त युवतीकाे घर दिल्लीमा रहेकाे बताइएको छ । उक्त युवतीको नाम केतिका शर्मा हो । २४ डिसेम्बर १९९५ जन्मेकी केतिको शरीर निकै आर्कषक खालको छ । उनकाे सुन्दरताले युवाहरु अाकर्षित हुने गर्छन् । उही युवतिले आफ्नो ह-ट तस्विर इन्स्टाग्राम मार्फत सेयर गरेपछि उनी राता-रात भाइरल बनेकाे थियाे ।
सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती
उनको फलोअरको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती हुन् । तर उनको तस्विरलाई हेर्दा यस्तो लाग्दैन् । यी युवतीकाे तस्विरले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा कमाएकाे थियाे ।
Prevकल्पनाको बन्यो नयाँ जोडी, अलिफ खान सँगको पहिलो भेटमै कल्पनाले गरिन् प्रपोज, अलिफ लाजले भुतुक्कै भए
Nextनियमित शारी’रिक स’म्बन्ध राख्ने महिलाहरु कसरी चिनिन्छन् ?